Zanu PF neMDC Dzoronga Sarudzo Pasati Paitwa Hwaro hweSarudzo
Mapato maviri ezvematongerwo enyika ari muhurumende yemubatanidzwa, anoti Zanu PFne MDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, akanga ari mushishi mukupera kwesvondo kusangana nevatsiri vemapato aya achisimbisa nyaya yesarudzo dzingangoitwa gore rinouya.
MDC yaVaTsvangirai yakaita misangano kuBulawayo neMasvingo ichitsinhira nyaya yekuti yakagadzirira kuita sarudzo gore rinouya, kana pachinge pasina mhirizhonga.
Ukuwo matunhu matatu muZanu PF anoti Manicaland, Mashonaland East pamwe neHarare Metropolitan, akatotsigira mutungamiri webato iri, VaRobert Mugabe, semunhu achamirira bato iri musarudzo dzegore rinouya.
Kunyange hazvo mapato aya ari mushishi kushambadza sarudzo, hapana zvati zvaitwa nevatungamiri vatatu vari muhurumende yemubatanidzwa pamusoro pehwaro hwesarudzo kana kuti election roadmap sezvakakurudzirwa neSADC kumusangano wakaitwa kuWindhoek muna Nyamavhuvhu.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari Programs Manager weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaPedzisai Ruhanya, vaudza Studio7 kuti zviri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika izvi chiratidzo chekuti hurumende yemubatanidzwa haichina ramangwana.